Ngathi-Hebei JiaTian Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle, Ltd.
Hebei JiaTian Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle, Ltd.yasekwa ngonyaka ka 2002, kwaye zisekelwe Shijiazhuang komzi, kwiphondo Hebei, benza iimpahla kumazwe angaphezulu kweminyaka elishumi. Sekusekwe ukusebenzisana kweshishini ixesha elide neYurophu, uMzantsi Afrika kunye nezinye iindawo kunye neemveliso ikakhulu iintsana kunye neempahla zabantwana. okoko yasekwa, inkampani yethu ibambelela kumgaqo "wokuthembeka kunye nokuthembeka" kuqala, ngokusebenza kunye nokuyilwa kwezinto ezintsha, emi nale migaqo, someleza unxibelelwano kunye nentsebenziswano nabathengi. Inkampani ihoye ukuqesha ukulima kunye nokubeka ezona zibonelelo zibalaseleyo zabasebenzi, kunye nokwenza iinzame ekuhlakuleleni umsebenzi ngokuziphatha okuhle, ukuze uphuhliso lwenkampani lube sempilweni kunye nozinzo ukuya phambili.
Ukuhanjiswa kweemarike zaphesheya:
Inkampani yethu izuza igama elihle kwimarike yamanye amazwe. Ngoku simisela ubudlelwane beshishini kunye nabaxumi abavela ngaphezulu kweeshumi elinesihlanu izithili kunye neendawo. Intengiso yethu ephambili ibekwe eHong Kong, eYurophu nase Mzantsi Afrika.
Ngaphezulu kwamashumi amathathu esivelisayo, sinobutyebi bamava okuvelisa iimveliso zokuthumela ngaphandle kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho engqongqo.
I-Hebei Jiatian yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle i-CO., LTD ikhula ngokukhawuleza kakhulu kule minyaka idlulileyo. Ixabiso lethu lokuthumela ngaphandle lonyaka linokufikelela kwizigidi ezingama-25 zeedola zaseMelika.